» मैंले ल्याएको प्रस्ताव छलफल हुँदैन,मलाई कारबही गर्छु भन्ने, तपाईं को हो? अध्यक्ष प्रचण्ड मैंले ल्याएको प्रस्ताव छलफल हुँदैन,मलाई कारबही गर्छु भन्ने, तपाईं को हो? अध्यक्ष प्रचण्ड – हाम्रो खबर
मैंले ल्याएको प्रस्ताव छलफल हुँदैन,मलाई कारबही गर्छु भन्ने, तपाईं को हो? अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौ । ‘तपाईंले प्रस्ताव फिर्ता लिने कि कारबाही भोग्ने ?’ ओलीको प्रचण्डमाथि आक्रोशयुक्त भनाईलाई जस्ताको त्यस्तै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘ओली जङ्गबहादुरको शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो ।’ ओलीले प्रचण्डलाई कारबाहीको चेतावनी दिएपछि प्रचण्डले धम्की नदिन भनेका थिए । त्यसपछि बैठकमा दुवै नेताबीच चर्काचर्की भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मङ्गलबार बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भए । उनले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् । ओलीले आफुलाई चेतावनी दिएपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि मलाई कार्वाही गर्छु भन्ने तपाईँ को हो ? भन्दै ओलीसंग गर्जिंदै प्रस्तुत भएका थिए
बैठकमा प्रचण्डले बोल्दाबोलदै ओलीले जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाइन्छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए । निकै आक्रोशित ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई छलफलका लागि योग्य र लायक नभएकाले अस्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । तर, त्यसमा बहुमत सचिवालय सदस्य सहमत भएनन् ।
प्रचण्डले मन्तव्य दिंदै गर्दा रोक्न खोजेका ओलीलाई प्रचण्डले प्रश्न गर्दै भने, ‘तपाईं को हो ? मैंले ल्याएको प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन, छलफल हुँदैन भन्ने ?’ त्यसपछि दुवै अध्यक्षबीच भनाभन भयो । दुवै अध्यक्षबीच भएको भनाभनलाई अन्य सचिवालय सदस्यहरुले साम्य पारेका थिए ।